1. Yini okufanele ibhekwe lapho uthenga izinto eziguquguqukayo zokufaka izinto online? Ungakwenza kanjani ukukhetha okulungile? Ukuthengwa kwe-inthanethi kwezinto eziguquguqukayo zokuxhuma eziphilayo kusho ukuthi umkhiqizo uthengwa kuwebhusayithi yomkhakha. Ngakho-ke, kukhona okunye okufanele ...
I-Wei Cheng module yokuvimbela umlilo ukwenza i-firewall ephephile, singenza kangcono
Njengohlobo olusha lwezinto zokuxhuma, imodyuli ecisha umlilo ngokushesha yathatha ukuphakama kokuyala kwezinto zokuxhuma futhi yaba enye yezintandokazi ezimakethe zezinto zokwakha. Ukuzalwa kwemodyuli evimbela umlilo kwenze ukuthi impahla yokuxhuma yendabuko ilahlekelwe umbala, i ...
Eminyakeni esanda kwedlula, umbuso ubhekele kakhulu ukuvikela umlilo wamaphrojekthi wokwakha, futhi isibalo esikhulu sezinto zokuvikela umlilo sisetshenzisiwe ekwakhiweni kobunjiniyela. I-db-a3-cd01 isikhwama esinciphisa umlilo uhlobo olusha lokuxhaswa ngomlilo ...
Ungayibala kanjani inani lesicelo sokufakwa kwekhebula lomlilo
Ukumboza kwekhebula lomlilo kuvame ukwenziwa ngezinhlobo ezahlukahlukene ze-fire-retardant ne-plasticizer. Kungakha ungqimba olufanayo nolucwecwe lwesiponji sokugquma amagwebu lapho umlilo. Ingavimbela ngempumelelo futhi ivimbele ukusabalala nokusabalala kwelangabi futhi ivikele izintambo ...